सान्दर्भिकताको कसीमा ओली - नेपालबहस
सान्दर्भिकताको कसीमा ओली
| १६:५८:२१ मा प्रकाशित
२२ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली फेरि पनि भन्दैछन्– “अब कुनै नेपालीले भोकभोकै मर्न पर्दैन ।” उनले यस्तो उद्घोष धेरै पटक गरे । “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” उनको थेगो नै हो । कोरोन कहरले थला परेका बेला मजदूरी गर्ने श्रमिक भोकभोकै मरेका छन् । सायद ओली अखबार पढ्दैनन् । नत्र राजधानीमा भरिया काम गर्ने शेरबहादुर तामाङ र तराईमा मलइ सदा खानै नपाएर मरेको जानकारी उनलाई भइसक्थ्यो । हिजै मात्र उद्योगी व्यवसायीलाई बालुवाटारमा भेला पारेर उनी भन्दैथिए– कुनैपनि नेपालीले भोकै बस्ने अवस्था रहने छैन । बालुवाटारमा उनको यस्तो उद्गार चलिरहँदा खानाको आशामा बसेका लाखौं दीनदुखी कलेंटी परेका ओठ लिएर बसिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली नेपालीले खानै नपाउने दिन अब गए भनिरहँदा हजारौं नेपालीको ताँती पश्चिम नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा बग्रेल्ती देखिंदैछ । कोरोनाको त्रासले नेपाल फर्केका मजदूर दुईछाक खाने जोहो नभएपछि फेरि जोखिम मोलेरै भएपनि भारततिरै कामको खोजीमा लाइन लागेर जाँदैछन् । सरकारले खान पाउने अवसर दिलाएको भए उनीहरु अहिलेको महामारीका बेला पक्कै भारत छिर्ने थिएनन् । किनभने यतिखेर भारतमा झण्डै एक लाख मानिस दैनिक कोरोना संक्रमणको चपेटामा पर्न थालेको अवस्था छ ।
कोरोनाले संसारलाई नै तहसनहस पार्ने अवस्था आएपछि धेरै नेपाली स्वदेश फर्किएका थिए । त्यतिखेर ओलीले नेपाललाई नयाँ दिशा दिने बताएका थिए । नेपालमै पर्याप्त कृषि उपज उब्जाएर विदेश निर्यात गर्ने अवसरका रुपमा महामारीलाई उपयोग गर्ने उनले पटक पटक सुनाएका थिए । युवा शक्तिलाई नेपालमै अवसर उपलव्ध गराउने उनको गफ कसैले बिर्सिहालेको अवस्था पनि होइन । तर उनले फर्किएका युवा शक्तिलाई नेपालमै अवसर सिर्जना गर्ने कुनै कार्यक्रम दिएनन् ।बरु फेरि विदेश जाउन भन्ने नै आशय देखिएको छ । रेमिट्यान्सबाटै अर्थतन्त्र धान्ने ओलीको चाहनाले काम गरेको छ । युवालक्षित कुनै कार्यक्रम नआएपछि बाध्य भएर पेट पाल्नकै लागि भारतलगायत विदेशी भूमि जाने तरखरमा धेरै नेपाली छन् । युवाहरुलाई लाहुरे संस्कृतिमै हुर्काउने ओली डक्ट्रिन देखिन्छ ।
संकटका बेला नेतृत्वको पहिचान हुने हो । क्षमता र भिजन देखिने बेला पनि त्यही हो । उदाहरणका लागि हामी जापानलाई लिन सक्छौं । जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै गत महिना पदबाट राजीनामा दिए । जापानकै इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री बन्न सफल आबेको लोकप्रियताको ग्राफ थोरै झरेको थाहा पाउनेवित्तिकै राजीनामा दिए । शारीरिक रुपमा अस्वस्थ भएको बहानामा उनले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । यद्यपि उनी ओच्छ्यान पर्ने गरी विरामी भएका हैनन् । पाचन प्रणाली अलि कमजोर भएकाले थोरै समस्या देखिएको हो । तर हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीको चाला हेर्दा लाग्छ– मिले आजीवन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टाँस्सिरहन पाए हुन्थ्यो ।
देशको प्रधानमन्त्री पदमा आसिन ओलीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक छ, यो लोकलाई राम्रो थाहा छ । तर ओली आफ्नो स्वास्थ्य बारे कसैले टिप्पणी ग¥यो भने सहन सक्दैनन् । करिब तीन साताअघि राष्ट्रिय समाजवादी जनता पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यस्थितिबारे चासो राख्दै एउटा वक्तव्य निकाल्यो । जसमा भनिएको थियो– प्रधानमन्त्री ओलीको “शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य” राज्य सञ्चालनका लागि पूर्ण सक्रिय हुन नसक्ने अवस्थामा रहेकाले मार्ग प्रशस्त गर्नु बाञ्छनीय हुनेछ । तर यो विज्ञप्ति ओलीका लागि ज्यादै अप्रिय रह्यो । ओलीको सचिवालयले तत्कालै प्रतिकार गर्दै अर्काे विज्ञप्ति निकाल्यो । र भन्यो– अमानवीय । केपी ओली व्यक्तिप्रति लक्षित गरेर त्यसो भनिएको भए साँच्चै अमानवीय भन्न मिल्थ्यो ।
तर प्रधानमन्त्री भनेको व्यक्ति विशेष होइन, संस्था हो । संस्थाबारे सार्वजनिक टिप्पणी गर्न पाइने कुराको ख्याल गरिएन । ओली सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति हुन् । उनको स्वास्थ्यबारे चासो राख्ने हकअधिकार सबै नागरिकलाई हुनेछ । साथै, राजनीति तहबाट राखिने धारणाको हैसियत पनि त्यस्तै हुन्छ । तर ओलीले यहाँ आफूलाई सामान्य व्यक्तिका रुपमा मात्र प्रस्तुत गर्न चाहे । उनले आफू राजकीय हैसियतप्राप्त पदाधिकारी हुँ भन्ने यथार्थ बिर्सन खोजे । हुनपनि ओली महिनौं अस्पताल बसेर शासन सत्ता चलाउने अनुवभबाट यहाँसम्म आइपुगेका व्यक्ति हुन् । उनको स्वास्थ्यबारे चिन्ता गर्ने वा चासो राख्ने नैसर्गिक हक हरेक नागरिकको हो ।
अहिले कोरोनाका कारण स्वास्थ्य जोखिम सर्वत्र बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य त्यसैपनि दुरुह र कमजोर छ । दुई दुई पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरेको बुढो शरीरले कोरोना संक्रमणसँग जोरी खोज्न सक्दैन । त्यसैले अहिले ओलीका लागि आराम नै अच्छा ओखती हो । दौडधूप र धपेडी उनका लागि उपयुक्त हुन सक्दैन । तर ओलीलाई यस्तो सुझाव दिने मानिस संसारकै सबैभन्दा ठूलो सत्रू लाग्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा बढी सक्रिय भएर खट्ने बेला हो । तर ओलीको स्वास्थ्य प्रतिकुलताले त्यो संभव छैन । यसको अर्थ सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न सक्दैन । परिणाम भनेको नेपाली जनताले पर्याप्त सेवासुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने छ ।
त्यसैले बाध्य भएर एउटा कुरा भन्नैपर्छ– यो देशमा अब ओलीहरुको कुनै सन्दर्भ र औचित्य छैन । “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” भन्ने नारालाई मूर्तता दिने ल्याकत ओलीको छैन । उनीलगायत धेरै नेताहरुले आफूलाई अभिभावकमा रुपान्तरण गरे हुन्छ । ओलीको अनुभव पछिल्ला पुस्तालाई काम लाग्न सक्छ । तर पटक पटक अवसर पाउँदासमेत केही गर्न नसक्ने क्षमतालाई अब धेरै परीक्षण नगरौं । करिब दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त कार्यकारी प्रमुख हुँदासमेत केही लछारपाटो लगाउन नसक्ने ओली समसामयिक राजनीतिकका कुरुप पात्रका रुपमा दरिएका छन् । सत्ता टिकाउन साम,दाम,दण्ड, भेद सबै अपनाउन माहिर खेलाडी ओलीको अबको बसाई जति लम्बियो त्यसले नेपालको राजनीतिलाई अझै प्रदूषित तुल्याइरहने हो ।
इतिहासले ओलीलाई गज्जबको अवसर प्रदान गरेको थियो । तर मौकाको सदुपयोग उनले गर्न चाहेनन् वा सकेनन् उनै जानुन् । बीपी कोइरालापछि सर्वशक्तिमान सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका ओलीले देश र जनताका लागि केही गर्ने छेकछन्दै देखाएनन् । बरु राजनीतिक बिचौलियाको भरिया बनिदिए । आज नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा बिचौलियाको बिगबिगी छ । इमान्दार र निष्ठावान नेता कार्यकर्ता पाखा परेका छन् । सरकार चलाउने काम बिचौलियाले गरेका छन् । ओली त केवल बिचौलियाको बुख्याँचा बनेका छन् । उनले चाहेरपनि केही गर्न सक्दैनन् । सबै काम तिनै बिचौलियाको इच्छामा निर्भर गर्छ । त्यसैले भावी पुस्ताले स्मरण गरुन् भन्ने चाहना राख्ने हो भने ओलीले अब देशलाई निकाश दिन सके राम्रो ।
पुनर्गठनमा बढ्यो सकस : ओली र प्रचण्डबीचकाे छलफल निष्कर्षबिहीन २३ घण्टा पहिले
नेपालबहसमा प्रकाशित समाचारको प्रभाव:- अल्मलियो थप गर्न खोजिएको डीआईजी दरबन्दी १ दिन पहिले
आजै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको सम्भावना २ दिन पहिले
ठट्टा हैन हाम्रो राष्ट्रवाद ! ३ दिन पहिले
ओली सरकारको अर्काे राष्ट्रघात:- निगम मारेर यति पास्ने नीति ३ दिन पहिले
सरकारलाई जनभावनाअनुसार काम गर्न सुझाव :शङ्कर भण्डारी भर्खरै
प्रदेशसभा सदस्य सिग्देललाई कोरोना संक्रमण ७ मिनेट पहिले
ब्रोइलर कुखुरालाई रंग लगाएर लोकल भन्दै १५० रुपैयाँमा बिक्री ! १९ मिनेट पहिले